I-Quinn Inn - Indawo Yokutyela Epholileyo Enesidlo Sakusasa! - I-Airbnb
I-Quinn Inn - Indawo Yokutyela Epholileyo Enesidlo Sakusasa!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguQuinn Inn
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uQuinn Inn iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Quinn Inn likhaya elinembali, kwaye yenye yeyokuqala kwisitrato esikhulu sedolophu yethu encinci yasePortage, ePennsylvania! Ihlaziyiwe ukuze ilungele iimfuno zendima yayo entsha, ukwamkela iindwendwe njengendawo yokuqeshisa enomtsalane yabucala.
Ekuqaleni kwakukho ikhaya likaVictoria elakhiwa xa isitalato esiyintloko sePortage sasingenanto yakwenza nothuli, neendlela ezisecaleni ezakhiwe ngamaplanga. I-Quinn Inn ngoku inamagumbi ayi-3 aphucukileyo anezinto zokondlula ibhedi ezitofotofo kubantu abakwaziyo ukulala. Le ndawo inendawo eyaneleyo yokuphumla okanye yokonwaba ngegumbi elikhulu lokuhlala, ukutya okulungiswe ngokupheleleyo ekhitshini, igumbi lokutyela elisemthethweni, kunye negumbi elihonjiswe kakuhle likaVictoria. Iyadi enkulu engasemva inendawo eyaneleyo yokudlala yabantwana, kwaye kukho indawo eyaneleyo yokupaka ukuya kutsho kwiimoto eziyi-4. Ukuba undwendwela ngexesha leholide, qiniseka ukuba usebenzisa ezona ndawo zifanelekileyo edolophini xa usenza imidlalo. Iveranda yangaphambili yeyona ndawo ifunwa kakhulu yokubukela izibindi zedolophu!
I-Quinn Inn isembindini wePortage, PA. Iminyango emibini yi-Chatterbox, ivenkile yokutyela enomtsalane eneentlobo ngeentlobo zekofu kunye nemali etsalwayo. Qiniseka ukuba uzama "uSodolophu", ikomityi ye-Joe enomkhenkce oyi-ice cream kuyo, ogama linguSodolophu odlulileyo wedolophu yethu oqhuba ibhokisi yeChatter nomfazi wakhe!
Le dolophu ineendawo eziliqela zokutya ezisusela kwi- "World Famous Wings" ukuya kwi-Italian, i-Tshayina, kunye nokutya okukhawulezayo. Qiniseka ukuba uyakuma kwi-Shellz ukuba awuzange uye kuyo, uza kundibulela!
Le dolophu iphinde ibe nenye yezona paki zintle zasekuhlaleni kwiphondo, iCrichton McCormick park. Inemisebenzi emininzi kakhulu equka ipuli yokuqubha, iinkundla zebasketball, ukuloba, kunye neendawo zokudlala! Ikwayikhaya lomthendeleko omhle wedolophu qho ngoAgasti (Portage Summerfest).
Umbuki zindwendwe ngu- Quinn Inn
Umphathi Wendlu yethu uza kufowunelwa xa unemibuzo onokuba nayo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi!